Ukukhiqiza ugwayi weCigarette Tin Box, I-Wholesale for Packaging
Imikhiqizo ye-Cigarette Tin Box
Amabhokisi we-Cigarette Tin Box angagcina imikhiqizo kagwayi ivalwe emoyeni, eyayomisa ugwayi futhi ivikeleke ekulimaleni (i-tin ephaketheni kwakuyindlela ebukhali yokugcina ugwayi ogoqiwe kunephepha eligoqiwe noma ibhokisi).
Isitsha Esincane Esibumbana Sokufaka Ugwayi Kokubheja
I-Custom Rectangular Metal Box Encane Yokupakisha Ugwayi
Kungani u-Cigarette Tin Box ubalulekile ekubhemeni?
Ibhokisi le-Cigarette Tin Box lalibalulekile ezinkampanini zikagwayi.
Amabhokisi we-Cigarette Tin kungagcina imikhiqizo kagwayi ivalwe emoyeni, eyayomisa ugwayi futhi ivikeleke ekulimaleni (i-tin ephaketheni kwakuyindlela ebukhali yokugcina ugwayi ogoqekile kunesikejana sephepha noma ibhokisi).
Amathini kagwayi ayenziwa ngenani elincane kuphela lezimo nezitayela. Ama-Cylinders kanye namabhokisi ayesetshenziselwa ugwayi owathengiswa ngobuningi, kuyilapho amathani asezingeni eliphansi noma amateve ayenzelwe ukuthwalwa ephaketheni. Ifomu lesithathu kwakuyi-tinbox ibhokisi lesidlo sasemini, elaliqanjwa ngokuphathwa kwentambo nokusetshenziswa kaningi ngababhemayo nezingane zabo ngokuletha ukudla kwabo kwasemini emsebenzini noma esikoleni.
Iningi likagwayi lingahle lithengwe ngamathini omkhiqizo, ngamayunithi amakhulu okuthengisa athengiswa ngamathini agcwele i-vacuum afana nokuthi amabhola e-tennis athunyelwa kanjani manje. Le ndlela yasiza ukugcina ugwayi musha futhi wawugwema ukungaboli njengoba ukuhambisa kuthathe isikhathi eside ngalezo zinsuku ezedlule. Kodwa-ke, amathayi asele ephaketheni wawungumkhiqizo iningi lababhemayo ababeyigcina yonke impahla yabo yokubhema namathini kagwayi.
Lokhu kusiletha kahle emikhiqizweni yamabhokisi ethu, okuncoma ifa lethu ngokuguquka kwesimanje. Uphawu oluqinile oluholwa 'yisilo' lusiza ukuthi ugqame ngenkathi ukuhlangana kukathayela kugcina konke okubalulekile endaweni eyodwa. Ukubhema kuguqukile, futhi noma ngabe uzigingqa owakho noma ungumuntu obhemayo wepayipi, ithini yilona isesekeli esifanelekile.
Ngakho-ke ngokuzayo lapho uthenga upayipi kagwayi ku-inthanethi noma ugwayi wakho ogingqikayo, qiniseka ukuthi ungeza ibhokisi likathayela ku-oda lakho. Ziyasebenziseka, zishibhile, futhi gwema ukuthi amaphakethe akho agcwele izihlungi ezikhululekile nemicu kagwayi! Yini okungafanele uyithande! Izesekeli Zokubhema: Ibhokisi Elithobekile Likasikilidi